Xildhibaan Qoone: Xeerka Qoondada ku noqoshada Miisaaniyadda 2017; kuma kala badan karaan dowlad-goboleedyadu! | Mustaqbal Radio
Home - Wararka Somalia - Xildhibaan Qoone: Xeerka Qoondada ku noqoshada Miisaaniyadda 2017; kuma kala badan karaan dowlad-goboleedyadu!
Xildhibaan Maxamed Xasan Ibraahim (Qoone);
Xildhibaan Qoone: Xeerka Qoondada ku noqoshada Miisaaniyadda 2017; kuma kala badan karaan dowlad-goboleedyadu!
July 15, 2017	24 Views
Xildhibaan Maxamed Xasan Ibraahim (Qoone) oo si gaar ah ula hadlay Mustaqbal Radio; ayaa ka hadlay arrimo ay kamid yihiin:
1. Xeerka Qoondada ku noqoshada Miisaaniyadda 2017;
2. Lacag miisaaniyadda loogu daray Rugta ganacsiga iyo Wershadaha Soomaaliyeed oo muran u dhexeeya ganacsatadu sababay khilaaf
3. Xukuumadda oo uu sheegay in ay isu bixisay magaca xukuumadda shacabka, kaas oo aan sax ahayn
4. Iyo hadal uu Sheekhh Nuur Baaruud; jeediyey oo ku saabsan mucaaradka iyo aragtida ka dhanka ah xukuumadda raisalwasaare Xasan Cali Khayre.
Mar uu ka hadlayey in qoondadu ay ku kala badan karto dhinaca mashaariicda iyo maalgelintooda, marka ay lacagta bixinayaan tusaale ahaan Bangiga adduunka iyo hay’adaha kale ee deeqaha bixiya, balse marka ay timaaddo ku talagalka dowladdu u qoondayneyso miisaaniyad ahaan dowlad goboleedyada waxa uu sheegay in aanay kala badnaan Karin; oo ay tahay in loo sinnaado.
Lacag miisaaniyadda loogu daray Rugta ganacsiga iyo Wershadaha Soomaaliyeed oo muran u dhexeeya ganacsatadu sababay khilaaf; markii uu ka hadlayey waxa uu sheegay in ganacsatada oo dhan laga qaado canshuur laguna bixiyo meelaha kharashka u baahan ee xukuumadda sida ciidanka iyo horumarinta Bulshada.
Xukuumadda oo uu sheegay in ay isu bixisay magaca xukuumadda shacabka, ayuu sheegay in ay ahad in Baarlamanaku xukuumaddu kormeero oo uu dabagalo waxqabadkeeda, balse ay u muuqato in xukuumaddu inkireyso Baarlamanka, sidaas oo kalana madaxweynuhu inkirayo Baarlamanka , taasina ay sababi karto wadashaqeyn xumo dhexmarta labada hay’adood ee xukuumadda iyo Baarlamaanka.
Xildhibaan Maxamed Xasan Ibraahim (Qoone); ayaa ka hadlay hadal uu dhowaan Sheekh Nuur Baaruud ka jeediyey madal ciidanka loogu sameynayey taakuleyn kaas oo xildhibaanada qaarkood ka muujiyeen welwel iyo ku tumashada hay’adaha dastuuriga ah.
Xildhibaan (Qoone); ayaa sheegay in xukuumadda ay u taal shaqo ka weyn isbuunbuunin, waxa uu tilmaamay in ay hagaajinta dhaqaalaha iyo ammaanku ay kamid yihiin shaqooyinka waaweyn ee u yaal xukuumadda.
Xildhibaan Maxamed Xasan Ibraahim (Qoone) ayaa yiri: “Baarlamaanku isaga ayaa doortay madaxweynaha, madaxweynuhuna Raisalwasaare ayuu doortay, Baarlamaanka ayaa codka kalsoonida siiyey Raisalwasaaraha iyo xukuumaddiisa, marka haddii ay inkirayaan Baarlamaankii, ama ay dacaayadeeyaan waxa aan qabaa in adeegsiga noocaas ah ee warbaahintu uusan sax ahayn, Baarlamaanka ayaa xukuumadda iyo madaxweynaha codsiiyey, isaga ayaa wakiil ka ah shacabka”.
Waxa uu xildhibaanku u warramay Axmed Ciise Guutaale; oo weydiiyey: Sida uu u arkayo Xeerka Qoondada ku noqoshada Miisaaniyadda 2017; oo lagu muujiyey ku talagalka miisaaniyadda 2017; oo dowlad-goboleedyada qaarkood u qoondeeyey lacag ka badan kuwa kale?
Xildhibaan Maxamed Xasan Ibraahim_Qoone